Hamro Kantipur | तालिबानसँग डोनल्ड ट्रम्पको कुराकानी,के थियोे विषेश ? तालिबानसँग डोनल्ड ट्रम्पको कुराकानी,के थियोे विषेश ?
तालिबानसँग डोनल्ड ट्रम्पको कुराकानी,के थियोे विषेश ?
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अघिल्लो वर्ष तालिबानका प्रमुखसँग कुरा भएको जानकारी दिएका छन् । ट्रम्पले एक रेडियो कार्यक्रममा यसबारे खुलासा गरेका हुन् ।
यी प्रमुख को थिए, यसबारे उनले स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् तर जब रेडियो शोका उद्घोषकले ‘तपाईंले मुल्ला अब्दुल गनी बरादरको कुरा गरिरहेको हो ?’ भनेर सोधे तब उनले ‘हो, मैले उनीसँग कुरा गरेको थिएँ,’ भनेर जवाफ दिए ।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहिबार २६ अगस्टमा कन्जरभेटिभ टक रेडियो होस्ट ह्यू ह्यूवेटको कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सुरक्षाबलका लागि सन् २०२० मा कुराकानी भइरहेका बेला मैले उनीसँग छलफल गरेको थिएँ ।’
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबानका सह–संस्थापक र उपनेता हुन् । संगठनका नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा हुन् ।
ट्रम्पको भेटघाट कसरी निश्चित भयो ?
रेडियो कार्यक्रममा उनलाई ‘के तपाईंले मुल्ला बरादरसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो ? उनले तपाईंलाई के भनेका थिए ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले मुल्ला बरादरलाई यदि उनीहरुले अमेरिकालाई हानी पुर्याउँछन् भने हामीले तालिबानलाई आजसम्म विश्व इतिहासमा कहिल्यै नभएको त्यस्तो चोट दिनेछौं भनेर स्पष्ट र कडा शब्दमा भनेको थिएँ ।’
ट्रम्पले विस्तारमा यसबारे कुराकानी गरे र उनले कुराकानीको सुरुवात उत्तर कोरिया र किम जोङ उनसँग भेटघाटको मुद्दाबाट सुरु गरे ।
उनले भने, ‘मेरो उनीसँग (तालिबान नेता) कुराकानी निश्चित गरियो र मानिसहरुले मैले यसो गर्न नहुने बताइरहेका थिए । हुन त मैले उत्तर कोरियाका किम जोङ–उनसँग पनि कुराकानी निश्चित गरेको थिएँ । हामी (अमेरिका–उत्तर कोरिया) बीच कुनै परमाणु युद्ध भएको थिएन । म यदि राष्ट्रपति नभएको भए ओबामाको कुरा साँचो हुन्थ्यो र हामीबीच परमाणु युद्ध भइसकेको हुन्थ्यो ।’
‘राष्ट्रपति ओबामाले मलाई हामी उत्तर कोरियासँग परमाणु युद्धतर्फ गइरहेका छौं भनेका थिए । मैले उनलाई ‘तपाईंले कहिल्यै उनीसँग कुरा गर्नुभएको छ ?’ भनेर सोध्दा उनले ‘छैन’ भने । मैले त्यसपछि उनलाई ‘तपाईंलाई यो राम्रो विचार हो जस्तो लाग्दैन ?’ भनेर पनि सोधेँ ।’
‘खैर, केही छैन, मलाई थाहा थियो कि उनी (ओबामा) उनीसँग कुराकानी गर्न चाहन्थे तर उनी कहिल्यै कुरा गर्न गएनन् । मलाई लाग्छ, दोस्रो पक्ष (उत्तर कोरिया) पनि ओबामासँग कुराकानी गर्न चाहँदैनथ्यो । मैले ती चर्चित (तालिबान) प्रमुखसँग कुराकानी गरेको थिएँ ।’
ट्रम्पले कुराकानीमा के भनेका थिए ?
त्यसपछि कार्यक्रमका सञ्चालकले उनलाई सोधे, ‘के तपाईंले बरादरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधे । यसको जवाफमा उनले भने, ‘हो, म उनकै कुरा गरिरहेको छु जसलाई एक प्रमुखको रुपमा चिनिन्छ ।’
ट्रम्पले भने, ‘ती प्रमुखको विषयमा म खासै निश्चित थिइनँ तर म अब निश्चित छु कि उनी बरादरी नै थिए जोसँग मैले कुरा गरेको थिएँ । मलाई याद छ कि मैले उनीसँग कुरा गर्न सुरु गर्दा परिचयमा हेलो भनेको थिएँ, त्यसपछि उनी बेस्सरी चिच्याएका थिए । त्यसपछि मात्रै मैले उनीसँग कुराकानी सुरु गरेको थिएँ ।’
‘मैले उनलाई ‘सुन्नुहोस्, हामी एउटा लामो कुराकानी सुरु गर्दैै छौं र एउटा कुरा यो भन्न चाहन्छु कि यसलाई म तपाईंको अगाडि फेरि कहिल्यै दोहोराउने छैन । म यो भनिरहेको छु कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले केही खराब स्थितिको सामना गर्नुपर्यो भने, यदि तपाईंहरुले हाम्रा नागरिक वा कोही पनि अमेरिकी नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभयो भने वा यदि तपाईंले केही पनि असामान्य गर्नुभयो भने तपाईंले थाहा पाउनुहोस् कि म तपाईंलार्य यस्तो चोट दिनेछु कि विश्व इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैलाई यसरी हान्न सकेको छैन । तपाईंमाथि यस्तो व्यवहार गरिनेछ कि कहिल्यै कुनै देशले र कहिल्यै कुनै व्यक्तिले विश्व इतिहासमा कसैमाथि यसरी कुटपिट गरेको छैन होला ।’
‘त्यसपछि हामीले विशेष स्थान र शहरमा कुराकानी गर्यौं । मलाई याद छ कि मैले उनको शहरको नाम दोहोराएको थिइनँ । यसरी हामीले कुराकानी सुरु गरेका थियौं । त्यसपछि उनले मलाई एउटा प्रश्न सोधेका थिए र मैले उनलाई ‘सोध्नुहोस्’ भनेको थिए । उनले त्यहि एउटा प्रश्न मात्रै सोधेका थिए । ’
‘मैले कुराकानीकै क्रममा २१ वर्षपछि हामी अफगानिस्तान छोड्दैछौं भनेँ । हामीले छोड्न लागेका बेला तपाईंले हामीलाई एक्लै छोड्नुपर्नेछ र हामी ठूलो सम्मान र अत्यधिक गौरवका साथ जाँदैछौं । र हामीले यो स्थितिलाई ध्यानमा राख्दैछौं । हामी आफ्नो समय लिँदैछौं । हामीले १ मे को मिति तोकेका छौं तर उनीहरु केही शर्त लागू गराउन चुके । म एक मेमा बाहिरिन चाहन्थेँ । मैले छलफल गर्दा हामी एक मेअघि छोडिदिन्छौं भनेको थिएँ । तर उनीहरुले शर्त तोडे र त्यसपछि हामीले उनीहरुमाथि बस बर्सायौं र तीब्र गतीमा वार गर्यौं ।’
‘त्यसपछि उनीहरुले तोकेको शर्तमा सहमत हुन उनीहरुले हामीलाई भने तर मैले ‘हुँदैन’ भनेँ किनभने तपाईं पहिले नै पछिल्लो शर्तमा सहमत थिए । हामीले उनीहरुलाई राम्रोसँग समातेका थियौं । उनीहरु काबुलमा थिएनन् । तपाईंहरु हेर्नुहोस् कि उनीहहरुले अफगानिस्तानमा कहाँबाट कब्जा गर्न सुरु गरेका थिए, जहाँ मैले उनीहरुलाई छोडेको थिएँ । म जानेबित्तिकै उनीहरु खुंखार हुन सुरु भए किनभने उनीहरु अर्का राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गरिरहेका थिए ।’
‘मलाई एकपटक पुनः राष्ट्रपति कार्यकाल कति महत्वपूण र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने महसुस भयो । जबसम्म यस्तो भएको थिएन तबसम्म मलाई महसुुस भएको थिएन किनभने पछिल्लो हप्तादेखि निकै तीब्र गतिमा केही डरलाग्दा र मूर्खतापूर्ण निर्णय लिइयो ।’
त्यसपछि ट्रम्पले अमेरिकी सेनाले पहिले नै देश छोडेकोमा कडा आलोचना गरे । उनले भने, ‘मानिसहरुलाई निकाल्ने र आफ्नो सरसामानलाई त्यहाँबाट लैजानु अघि सेनालाई जान अनुमति दिनु खराब निर्णय थियो । ’
पूर्व राष्ट्रपतिले सेनाको सामान मात्रै ८३ अर्ब डलरको भएको बताए ।